Momba anay - Chengdu Zhihongda Nonwoven Bag Co., Ltd.
Chengdu zhihongda nonwoven bag Co., Ltd. natsangana tamin'ny 2013, dia miorina ao Chengdu, atsimo andrefan'ny China, izay mikarokarena amina kitapo tsy misy tenona, kitapo landihazo, kitapo vita amin'ny kitapo, kitapo polyester, kitapo azo ahodina, kitapo misy laminated, harona fisintomana, kitapo milamina kokoa, kitapo akanjo, vokatra hafa tsy tenona ary vokatra fonosana eco. Orinasa famokarana mampifangaro endrika, R&D, famokarana sy serivisy harona, ary manome vahaolana vahaolana ho an'ny kitapo Eco.
Manana traikefa matihanina mihoatra ny 10 taona amin'ny famokarana kitapo Eco isika. Manome kitapo Eco ho an'ny tsena eo an-toerana izahay ary manondrana any amin'ny tsena ivelany, toa an'i Eoropa, Amerika, Kanada, Aostralia, Japon, Singapore, sns., Ekipa matihanina izahay amin'ny kaomandy OEM ODM anao. Ho an'ny kaomandy OEM, afaka manampy amin'ny famolavolana ny fizotry ny famokarana rehetra isika, manomboka amin'ny foto-kevitra ka hatrany amin'ny vokatra farany; ho an'ny kaomandy ODM, misy safidy maro ho anao.
Ny kitaponay dia sariaka tontolo iainana sy maharitra, fampitaovana dokambarotra tsara eny an-dalambe. Kitapo endrika tsy manam-paharoa no hitondra tombony tsy manam-petra anao amin'ny fampiroboroboana sy ny fananganana marika, manamafy hatrany ny marikao izy io’s sary rehefa mampiasa. Ny orinasanay dia manizingizina ny hampiasa ny fomba fanontana miaro ny tontolo iainana sy ny lamba namboarina sy maharitra ho an'ny kitapo.
CHENGDU ZHIHONGDA no tokony ho TOP ONE amin'ny orinasa eco-bag. Ny tanjonay dia ny hanomezana kitapo misy kalitao tsara kokoa miaraka amin'ny vidiny mirary ho an'ny mpanjifa samihafa manerantany. ny tanjonay dia ny manampy ny mpanjifanay hametraka endrika marika tsara sy hiarovana ny tontolo iainana. Tianay ny hanaiky ny filan'ny mpanjifanay sy ny heviny isan-karazany, hanohy hamorona kitapo eco vaovao ho an'ny mpanjifanay. Manome serivisy matihanina ho an'ny mpanjifantsika izahay mba hitehirizana ny fotoanany sy ny sarany sarobidy.
Chengdu zhihongda dia manana fitaovana fanaovana kitapo eco feno, nanaraka fomba maodely famokarana mandeha ho azy ary fanjairana tanana manokana. Izy io dia nandroso milina fanontana gravure miloko sivy, milina fanamainana, karazana milina fanjairana rehetra, manodidina ny 106 ny mpanonta lamba fanaovana pirinty sy mpiasa manjaitra.
Ny ekipanay mivarotra dia mahafantatra tsara ny filan'ny mpanjifanay manokana, toy ny haben'ny kitapo eco, ny fanontana logo sy ny lamina, ny fifantenana ny lamba, ny fisafidianana ny process, sns. Miara-miasa amin'ny mpanjifanay izahay mba hanao izay tsara indrindra vitantsika. Ny fotoana fandefasana dia tena zava-dehibe ho anay, satria tsy afaka manadino ireo mpanjifanay mampiasa daty izahay. Raha sendra vonjy maika amin'ny famokarana dia hampahafantarinay ny mpanjifa amin'ny ora ara-potoana ihany koa.
Taona vitsivitsy lasa izay, ny mpivarotra eran'izao tontolo izao dia nampiasaina hanome harona plastika maimaim-poana ho an'ny mpanjifa. Ity karazan'asa azo ampiasaina amin'ny harona plastika ity dia sarotra ho simba mandritra ny zato taona ary lazaina ho "fandotoana fotsy". Amin'ny fitiavana natiora sy kitapo tote dia nanangana ny orinasa "Zhihongda" izahay hamatsy harona ara-tontolo iainana eny an-tsena.
Ny anaran'ny orinasanay "Zhihongda" dia manantena fa afaka miara-mamorona tontolo iainana tsara isika, hahatratrarana ny iraka ampanaovina anay.
Miteraka fahalotoan'ny tontolo iainana ny fianantsika isan'andro. Andraikitsika ny mampihena ny fahalotoan'ny tontolo iainana. Amin'ny fampiroboroboana sy fampidirana ireo vokatra vaovao, dia mijery hatrany ny olana ara-tontolo iainana isika. Tao anatin'izay taona lasa izay dia niatrika zava-tsarotra maro izahay ary misaotra ny fanohanan'ny mpanjifanay.
Dikan'ny Eco Bag
Kitapo mpiorina tontolo iainana dia natao sy novokarina hampiasaina indray, hampihenana ary hamerenana.
Ahenao ny fandotoana
Kitapo tsy misy tenona: amin'ny ankapobeny, ny kitapo iray dia azo ampiasaina indray mihoatra ny in-100.
Kitapo landihazo: amin'ny ankapobeny, ny kitapo iray dia azo ampiasaina indray mihoatra ny in-200.
Canvas Bag: amin'ny ankapobeny, ny kitapo iray dia azo ampiasaina indray mihoatra ny in-400.
Kitapo rongony: amin'ny ankapobeny, ny kitapo iray dia azo ampiasaina indray mihoatra ny in-500.
Kitapo azo aforitra nylon: amin'ny ankapobeny, ny kitapo iray dia mety mihoatra ny in-300.
Kitapo nylon matevina: amin'ny ankapobeny, ny kitapo iray dia azo ampiasaina indray mihoatra ny in-500
Kitapo tsy vita amin'ny laonitra: amin'ny ankapobeny, ny kitapo iray dia azo ampiasaina indray mihoatra ny in-200.
Voalamina Ba Bag: amin'ny ankapobeny, ny kitapo iray dia azo ampiasaina indray mihoatra ny in-300.
Kitapo taratasy mifono: amin'ny ankapobeny, ny kitapo iray dia azo ampiasaina indray mihoatra ny in-30.
Kitapo vita amin'ny landihazo: Akora voajanahary 100%, mety ho biodegradation farany aorian'ny fanariana azy.
Kitapo rongony: Akora voajanahary 100%, mety ho biodegradation farany aorian'ny fanariana azy.
Kitapo taratasy Kraft: Akora voajanahary 100%, mety ho biodegradation farany aorian'ny fanariana azy.
Kitapo tsy misy tenona: Fitaovana PP tsy misy poizina sy tsy misy fofona, ho simba mandritra ny 3 volana aorian'ny fanariana azy, manomboka manala baraka izy ary lasa vovoka ary miharo amin'ny natiora afaka 12 volana.
Kitapo misy lamina: Izy io dia fitaovana PP tsy misy poizina sy tsy misy fofona, ho simba mandritra ny 5 volana aorian'ny fanariana azy, manomboka mihasimba ary lasa vovoka ary miharo amin'ny natiora aorian'ny 18 volana.
Kitapo tsy tenona: 10% -30% amin'ireo akora ireo dia avy amin'ny fitaovana PP namboarina. Mbola azo averina simbaina ihany izy io raha toa ka alamina tsara.
Kitapo tenona: 20% -50% amin'ireo akora ireo dia avy amin'ny fitaovana PP namboarina. Mbola azo averina simbaina ihany izy io raha toa ka alamina tsara.
Kitapo PET: 80% -100% amin'ireo akora ireo dia avy amin'ny tavoahangy plastika namboarina. Mbola azo averina simbaina ihany izy io raha toa ka alamina tsara.
SAMPEL MAIMAIMPOANA Ao anaty stok! Manantena ny handray ireo fepetra takinao manokana, santionany ary pirinty modely izahay. Mifandraisa avy hatrany ny ekipanay matihanina!